Thwebula GO Launcher EX 1.12 isizulu – Vessoft
Thwebula GO Launcher EX
GO Sokuqalisa EX – a software oyifisayo ukubukeka kanye design ngokubonisa idivayisi. Isofthiwe ikuvumela ukuba uxazulule izicelo by amafolda, ukushintsha amafonti, khetha background, oyifisayo olubushelelezi izithombe kanye nokwenza amawijethi. GO Sokuqalisa EX iqukethe amathuluzi oyifisayo ubukhulu grid kwesikrini, Ukuvinjwa zokuzivikela kanye touch screen. Isofthiwe kuhlanganisa umphathi isicelo okuvumela ukuba uxazulule izicelo ngegama noma usayizi, ukuhlanza isilondolozi futhi enze ukususwa. GO Sokuqalisa EX futhi kwenza ukuhlomisa softwares esebenzisa anezele lahlanganisako.
Ukusekela for themes ehlukahlukene
Amandla ukuxhuma anezele
Amazwana on GO Launcher EX:
GO Launcher EX Ahlobene software: